चौरीको आलो रगतले रोग निको हुन्छ त ? | BeniOnline.com.np जिल्लाका ताजा अनलाइन समाचार
घर आर्थिक चौरीको आलो रगतले रोग निको हुन्छ त ?
चौरीको आलो रगतले रोग निको हुन्छ त ?
मुस्ताङको थासाङ गाउँपालिका–२ कोवाङ बोक्सीखोला रोग पखाल्न चौरीको आलो रगत पिउनेको भीड लागेको छ । विभिन्न रोगको उपचार हुने विश्वासका साथ सडक तथा हवाईमार्ग हुदै मुस्ताङ पुगेकाले लगाचार चारपाँचदिनसम्म आलो रगत पिउने गरेका छन् । औषधीको प्रयोग गरी धेरै रकम खर्च गरेकाहरुको रोजाईमा चौरीको आलो रगत पिउने मेला परेपछि प्रत्येक बर्ष बैशाख र साउन महिनामा चौरीपालक कृषकले मेलाको आयोजना गर्ने गरेका छन् ।
क्याम्पसमा अध्ययरत तथा विदेशबाट आएका यूवाहरुको भीड समेत मेलामा आएको मार्चे समुहका अध्यक्ष गोविन्द गौचनले बताए । उनका अनुसार छैटौ दिनसम्म करिव १५ सय जनाले रगत पिएको बताए । चिकित्सा पद्धतिबाट रोग निको नभएकाहरूले आफ्नो समस्या लिएर मेलामा पुग्न थालेपछि चौरीपालक कृषकले समेत मनग्य आम्दानी गर्न थालेका छन् ।
‘दैनिक सयजनालाई सेवा दिएका छौ,‘यहाँ आउने नयाँ भन्दा पटकपटक आएका विरामी धेरै छन्’ गौचनले भने । चौरीबाट रगत निकालेपछि आम्ची समेत रहेका कृषकले चौरीको उपचार गदैं चरन क्षेत्रमा पठाउने गरेका छन् । रगत निकालिएका चौरीलाई विषेश हेरचाह सहित राख्ने गरिन्छ ।
मेलामा एउटै विरामीले २५ गिलाससम्म रगत पिउने गरेका छन् ।तल्लो मुस्ताङका चौरीपालक कृषकले आफ्नो गोठमा रहेका ९ सय चौरीलाई बोक्सीखोला नजिक रहेको मेलामा ल्याएका छन्। विगतका बर्षको तुलनामा मुस्ताङका साथै म्याग्दी, पर्वत,कास्की, बुटवल, काठमाण्डौ लगाएतका क्षेत्रबाट रगत पिउनका लागि सर्वसाधारणको संख्या धेरै देखिएका छन् ।
एकदशक देखी नियमित रगत पिउने गरेका विरामी समेत मेलामा भेटिन्छन् । मेलामा वडा अध्यक्ष विरेन्द्र थकालीले समेत कृषकको आम्दानी तथा विरामीको उपचार हुने बताए । ‘चौरीको स्वास्थ्य परिक्षण गरेपछि मात्रै मेलामा ल्याउने गरिएको छै,‘यहाँबाट भएको आम्दानीले कृषकको रोजीरोटी चल्छ’ थकालीले भने ।
उनले नेपालीसँगै घुम्न आएका विदेशीले समेत रगत पिउने गरेको बताए । उच्च हिमाली क्षेत्रमा रहेका खर्कहरुका यार्सागुम्वा, निरमसी, लगायतका बहुमुल्य जडिबुटीहरु खाएका चौंरीको तातोतातो रगत पिएमा गानोगोला, तुस, अपच हुने, सारिरिक स्फुर्ती बढ्ने,हाडजोर्नी, नसासम्बन्धि रोग, यौनउत्तेजना बढ्ने, चिसोबाट लाग्ने रोग निको हुने जनविश्वास रहेको छ। पशुसेवाका कर्मचारीले चौरीको स्वास्थ्य परिक्षण गरेपछि रगत निकाल्ने गरिन्छ ।
आलो रगत पिउने मेलामा दैनिक भित्रिने विरामीले कोवाङ, लेते लगाएतका क्षेत्रमा रहेका होटल ब्यवसाय समेत फस्टाएको छ । मेलामा राष्ट्रिय गाई अनुसन्धानका डा. माधव प्रसाद आचार्य समेत पुगेका छन् । एक चौरीगाईबाट १५–२५ गिलास र बढीमा ४०–६५ गिलास सम्म आलो रगत निकालेर पिउने गरिन्छ । चौंरीको घाँटीमा फलामको सानो र तिखो हतियार(चुलेसी)ले सानो प्वाल पारेर रगत निकाल्ने गरीन्छ । एक गिलास रगतको २ सय रुपैयाँ लिने गरिन्छ । तल्लो मुस्ताङको लेते, कोवाङ,टुकुचेको उच्च हिमाली क्षेत्रमा चौरी पाल्ने गरिन्छ ।
आलो रगतबाट उपचार सम्भव छैनः डा. धिरेन मल्ल
यता चिकित्सकले आलो रगतले रोग निको हुने जनविश्वास मात्रै भएको बताएका छन् । आलो रगत र मासु विज्ञानमा ताजा रगत खान योग्य बस्तु वा भागको रूपमा परिभाषित गरिएको छैन बरू रगतमा विभिन्न विषाक्त पदार्थका अवशेषहरू रहेका हुन्छ । सामान्य शारीरिक प्रक्रिया अनुसार संक्रमण गराउने हानिकारक विषाक्त तत्वहरू रगतको शुद्धीकरण प्रक्रिया पछि मूत्र प्रणाली मार्फत् बाहिर जान्छन् ।
यसकारण तातो ताजा रगत पिउनाले रगतमा हुने हानिकारक विषाक्त तत्वहरूका कारण मानव स्वास्थ्यमा जोखिम खडा गर्न पनि सक्छन् । यसले पशुबाट मानवमा सङ्क्रामक रोगहरू सर्ने मात्र नभइ वातावरणबाट पशुमा पनि सङ्क्रामक रोग फैलिने संभावना पनि उत्तिकै हुने काठमाण्डौ भौसिपाटीको नेपाल मेडिसिटी अस्पतालमा कार्यरत डा. धिरेन मल्लले बताए । आलो रगतले बाहिरी किटाणुहरु सर्न सक्ने बताए । उनका अनुसार मेला रोक्न असम्भव भएकाले पशुको स्वास्थ्य परिक्षण सहित जनचेतनामुलक कार्यत्रहरु सञ्चालन गरी विस्तारै प्रयोगकर्तालाई घटाउनुपर्नेमा सरोकारवालाको भनाई छ ।
बि.स २०५३ साल देखि म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–५ खोप्रालेकमा हिमाञ्चल उच्च मावि नागी र पाउद्धार माविको शैक्षिक तथा भौतिक पुर्वाधार जुटाउन हरेक बर्षको दुईपटक मेला लाग्ने गरेको छ । चौंरीको तातोतातो रगत पिएमा गानोगोला, तुस, अपच हुने, सारिरिक स्फुर्ती बढ्ने,हाडजोर्नी, नसासम्बन्धि रोग, यौनउत्तेजना बढ्ने विस्वासका सर्वसाधारण जाने गर्दछन् ।